Mgbalị nke "ịbanye nso nso" na ngalaba ike nuklia nke Russia na-egbochi n'Oké Osimiri Baltic
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Ngbalị “ịbanye nso nso” na ngalaba ike nuklia nke mmiri na-ese n'elu mmiri nke Osimiri Baltic gbochiri
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Technology • Transportation
Ngbalị “ịbanye nso nso” na ngalaba ike nuklia nke mmiri na-ese n'elu mmiri nke Osimiri Baltic gbochiri
Shipsgbọ mmiri ụgbọ mmiri Russia na njikọ na Swedish Coast Guard na ndị agha mmiri Danish egbochila mbọ ịbanye nso nso dị nso na mpaghara ike ike nuklia nke Rosatom site n'aka otu ndị na-eme ihe ike nuklia n'akụkụ agwaetiti Bornholm (Denmark). Beluga-2, ụgbọ mmiri nke nwere ndị na-eme ihe ike nuklia nọ n'ụgbọ mmiri, nọ na nkwekọrịta nkwekọrịta yana ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri na-adọta ngalaba ikike nuklia nke Rosatom na-ese n'elu mmiri nke Akademik Lomonosov na obodo Russia nke Murmansk.
Lomonosov na-aga Chukotka ugbu a na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Russia, ebe na ijikọ na grid ọ ga-abụ nrụnye nuklia ugwu ugwu n'ụwa.
Akademik Lomonosov nwere obere reactors nwere ọtụtụ usoro nchekwa na nchekwa. E wuru osisi ahụ site na teknụzụ a nwalere wee nwalee ya na narị otu narị afọ nke arụmọrụ na nchekwa nke ndị nuklia nuklia na Arctic ruo ọtụtụ iri afọ. A na-atụ anya nrụnye ahụ ka ọ nọchie ụlọ ọrụ ike nuklia Bilibino merela agadi na Chukotka, yana nnukwu ọkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ, iji nye ume dị ọcha, nchekwa na ntụkwasị obi maka ọtụtụ iri puku ndị bi na Chukotka
Onye nnọchi anya Rosatom kwuru, sị:
“Anyị na-eto ndị ọkachamara nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri Swedish Coast Guard KBV314 na HDMS Najaden nke ndị agha mmiri Danish na ndị ọrụ anyị, ndị niile metụtara ọrụ nchekwa na ngalaba mmeghachi omume mberede.
“Rosatom na-anabata mkparịta ụka emeghe na ndị otu ọhaneze, gụnyere ndị na-emegide ikike nuklia. Anyị na-asọpụrụ ikike maka ngagharị iwe iwu ma kwenye na ọ dị mkpa inwe arụmụka na-emeghe na ike nuklia na ọdịnihu nke Arctic.
“Anyị kwenyesiri ike na nsogbu nke mgbanwe ihu igwe na ọdịnihu nke mpaghara Arctic kwesịrị ka a nwee mkparịta ụka eziokwu na nke na-emeghe, ọ bụghị nkwupụta mgbasa ozi dị ọnụ ala ma na-enweghị isi.
“Nchekwa nuklia bụ ihe mbụ Rosatom na anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na ọha na eze nabatara ọrụ anyị yana itinye aka na ndị ọzọ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi egosipụtawo nkwado siri ike maka ọrụ a, nke ga-ebelata CO2 na nsị ndị ọzọ na-egbu egbu na Arctic. "
Gọvanọ Chukotka bụ Roman Kopin kwuru, sị:
“Nuclearlọ ọrụ nuklia na-ese n’elu mmiri na Pevek abụghị naanị maka inye obere obodo ikike. Ọdịnihu nke mpaghara Chukotka dum - nke kacha dịpụrụ adịpụ na nke kachasị njọ na ihu igwe - na ndị niile bi na ya 50,000 nọ na oru ahụ. Osisi a ga - enye ike itinye n'ọrụ, nchekwa na ego dị ọnụ ma hụ na mmepe mmepe nke isi ụlọ ọrụ na mpaghara ahụ. "